Osutɔ, anyinam, aprannaa nyinaa ma yehu sɛ Onyankopɔn yɛ kɛse (1-24)
Onyankopɔn betumi ama nnipa agyae adwuma a wɔyɛ (7)
“Dwinnwen Onyankopɔn anwonwadwuma ho” (14)
Sɛnea Onyankopɔn te no, ɛyɛ den sɛ nnipa bɛte ase (23)
Ɛnsɛ sɛ onipa biara dwen sɛ onim nyansa (24)
37 “Seesei me koma rebɔ kim-kim-kim,Na ɛrehuruhuruw fi baabi a ɛwɔ. 2 Monyɛ aso ntie sɛnea ne* nne rebobom no,Na muntie aprannaa a efi n’anom reba no. 3 Ogyaa mu wɔ ɔsoro ase baabiara,Na ɔsoma n’anyinam+ kɔ asaase ano noho. 4 Afei mmobom kɛse di akyi ba;Ɔde nne kɛse ma aprannaa bobom.+Bere a ne nne rebobom nyinaa, na ɛno* nso nenam mu. 5 Onyankopɔn nne ma aprannaa bobom+ ma ɛyɛ nwonwa;Ɔyɛ nneɛma akɛse a ɛboro yɛn ntease so.+ 6 Efisɛ ɔka kyerɛ sukyerɛmma sɛ, ‘Tɔ gu asaase so,’+ Na ɔka kyerɛ osu a ɛretɔ sɛ, ‘Tɔ gidigidi.’+ 7 Onyankopɔn ma nnipa gyae adwuma a wɔyɛ nyinaa,*Sɛnea ɛbɛyɛ a onipa dasani biara behu N’adwuma. 8 Wuram mmoa kɔ wɔn bon mu,Na wompue mfi wɔn bon no mu. 9 Mframa a ano yɛ den bɔ fi ɛno ara ne dan mu,+Na atifi fam mframa de awɔw ba.+ 10 Onyankopɔn de ne home ma nsu kyenkyen,+Na ɛma nsu akɛse kyen denneennen.+ 11 Yiw, ɔma osu yɛ omununkum ma;Ɔbɔ n’anyinam hwete+ omununkum mu. 12 Etwa ne ho frɛdɛfrɛdɛ kɔ baabiara a ɔkyerɛ sɛ ɛnkɔ;Nea ɔbɛka sɛ ɛnkɔyɛ wɔ asaase so biara no, ɛkɔyɛ.+ 13 Sɛ ɔde twe nkurɔfo aso* oo,+ ɔde yɛ asaase yiye oo,Sɛ ɔde kyerɛ ne dɔ a enni huammɔ oo, ɔma edi ho dwuma.+ 14 Hiob, tie eyi;Yɛ komm, na tɔ wo bo ase dwinnwen Onyankopɔn anwonwadwuma ho.+ 15 Wunim sɛnea Onyankopɔn ma omununkum yɛ adwuma?Na wunim sɛnea ɔma anyinam paapae wɔ ne mununkum mu no? 16 Wunim nea ɛma omununkum tumi sensɛn hɔ?+ Eyi yɛ Nea ne nimdeɛ wie pɛyɛ no anwonwadwuma.+ 17 Adɛn nti na w’ataade mu yɛ hyewBere a anaafo fam mframa ma asaase so yɛ dinn* no?+ 18 Wubetumi ne no atrɛw ɔsoro mu+Ama emu ayɛ den sɛ dade ahwehwɛ anaa? 19 Kyerɛ yɛn nea yɛnka nkyerɛ no;Yɛwɔ sum mu, enti yenhu nea yɛnka. 20 Metumi aka akyerɛ no sɛ mepɛ sɛ me ne no kasa anaa? Anaasɛ onipa bi aka biribi a ɛsɛ sɛ wɔbɔ No amanneɛ?+ 21 Ɛwom sɛ ewim hyerɛn,Nanso wontumi nhu hann,*Kosi sɛ mframa bɛbɔ ama wim atew.* 22 Atifi fam na hann a ɛhyerɛn sɛ sika kɔkɔɔ fi ba;Onyankopɔn anuonyam+ yɛ nwonwa dodo. 23 Ade nyinaa so Tumfo no de, sɛnea ɔte no, ɛyɛ den sɛ yɛbɛte ase;+Ne tumi sõ.+Na n’atɛntrenee+ ne ne trenee+ bebrebe no, ɔremmu so da. 24 Ɛno nti, ɛsɛ sɛ nnipa suro no.+ Efisɛ obiara a ɛyɛ no sɛ ɔyɛ onyansafo* no, ɔrenyɛ no adom.”+
^ Kyerɛ sɛ, Onyankopɔn.
^ Anaa “anyinam no.”
^ Nt., “Onyankopɔn kyekyere onipa biara nsa.”
^ Nt., “ɔde yɛ abaa.”
^ Anaa “ma asaase yɛ dinn.”
^ Kyerɛ sɛ, owia hann.
^ Anaa “mframa bɛbɔ apia omununkum akɔ.”
^ Nt., “ɔyɛ onyansafo wɔ ne komam.”